Waqtiga uu furmayo kalfadhiga 4-aad ee golaha shacabka oo lagu dhawaaqay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Waqtiga uu furmayo kalfadhiga 4-aad ee golaha shacabka oo lagu dhawaaqay
Ardaan Yare 20 August 2018
War qoraal ah oo kasoo baxay Xafiiksa Guddoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa maanta waxaa lagu uu shaaciyay waqtiga rasmiga ah ee uu furmi doono Kal-fadhiga 4aad Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya oo haatan ku jira fasax.
Waxa uu sheegay Guddoomiye Mursal in kalfadhiga 4-aad ee Baarlamaanka Soomaaliya uu furmi doono 10-ka bisha September ee bisha soo socota.
Xildhibaanada Golaha Shacabka ah ee ku maqan dalka dibadiisa ayaa waxa uu Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya ku wargeliyey in ugu dambeyn 5-ta bisha September ee sanadkaan ay dalka ku soo laabtaan.
“Sida aad la socoto furitaanka kalfadhiga 4-aad, ee Golaha shacabka waxaa loo qorsheeyay in la furo 10-ka September 2018-ka, sidaasi daraadeed waxaa dhammaan Xildhibaanada Golaha shacabka laga codsanayaa iney dalka soo galaan ugu danbeyn 5-ta September 2018, diyaarna u noqdaan xil-gudashada uga beegan kalfadhiga 4-aad ee Golaha shacabka,” ayaa lagu yiri war ka soo baxay Xafiiska Guddoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheikh C/raxmaan.
Madaxweyne farmaajo oo Muqdisho ku soo laabtay
Malaayiin Xujey Muslimiin ah oo maanta taagan Banka Buurta Carafo